Zlatan Ibrahimovic oo qof kasta ka yaabsaday, kaddib markii uu doortay shaxda kooxdiisa ugu fiican – Gool FM
(Yurub) 08 Luulyo 2019. Laacibkii hore xulka qaranka Sweden ee Zlatan Ibrahimovic ayaa halkiisa ka sii waday dabeecadihiisa gaarka u ah ee muranka abuura inta badan, kaddib markii uu ku soo daabacay boggiisa rasmiga ah ee Facebook qoraal cusub.
Zlatan Ibrahimovic ayaa doortay aragtidiisa shaxda kooxdii ugu fiicneyd uu kasoo muuqday xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta, in kabadan 20 sano garoomada kala duwan ee Yurub.
Ibrahimovic ayaa ilaa iyo haatan u ciyaaray xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta kooxaha kala ah Malmo, Ajax, Juventus, Inter Milan, AC Milan, Barcelona, Manchester United, waxaana uu haatan u ciyaaraa kooxda Los Angeles Galaxy ee dalka Mareykanka.
38 jirkan ayaa doortay koox ka kooban 11 ciyaaryahan oo dhamaan xarumaha kala duwan uu ka wada dhigay wada Zlatan Ibrahimovic laga soo bilaabo goolhaayaha, daafacyada, khadka dhexe ilaa iyo dhanka weerarka.
Zlatan Ibrahimovic kaddib shaxda kooxdan uu doortay wuxuu soo raaciyay qoraalka ah:
“Waan arki doonaa qofkii aan ka dooran karo tababarayaasha, lakiin waxaa dhici karta in isla Zlatan uu tababare u noqon doono”.
Taasoo uu kula jeedo inaysan jirin baahi loo qabo in kooxdan ay yeelato tababare maadaama ay ka kooban yihiin 11 Zlatan Ibrahimovic.
“Waxaa ka maqan ixtiraam” - Macalinka xulka qaranka Brazil Tite oo weeraray Lionel Messi